Jimcaha, Agoosto 14, 2020 Jimcaha, Agoosto 14, 2020 Jenn Lisak Golding
Dhibaatadaas ganacsiga ama hadafka waxqabadka ee kugu walaacaya waayadan dambe? Fursadaha ayaa ah xalka ay ku xiran tahay tikniyoolajiyadda. Maaddaama dalabyada waqtigaaga, miisaaniyadda iyo xiriirrada ganacsi ay sii kordhayaan, fursadda keliya ee aad kaga horreyso tartamayaasha adigoon maskaxdaada lumin waa otomaatiga. Kala beddelka habdhaqanka iibsadaha wuxuu dalbanayaa otomaatig Waxaad horay u ogtahay in otomatiggu yahay mid aan maskax lahayn marka la eego waxtarka: khaladaad yar, kharashyo, dib u dhac, iyo shaqooyinka gacanta. Sida muhiimka ah, waa waxa ay macaamiisha hadda filayaan.